Carla Montero. Hurukuro nemunyori weEl medallón de fuego | Current Literature
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 26/11/2021 12:00 | Hurukuro, Vanyori
Kutora mifananidzo: Carla Montero, nhoroondo ye Twitter.
Carla montero Akadzidza Law neBusiness Management, asi makore mashoma apfuura akazvipira kumabhuku. Akakunda Novel Readers Circle Award game Mukadzi ari panjodzi, kubudirira kwake kwekutanga. Vakabva vaenderera mberi Tafura yemaradhi, Ganda regoridhe, Nguva yechando pachiso chako kana Iyo Verelli Women's Garden. Nhoroondo yake yazvino ndeye Iyo menduru yemoto uye yakabuda muna Gumiguru apfuura. Ndokutenda zvikuru nguva yenyu netsitsi dzenyu pakundipa iyi hurukuro umo anotaura nezvake uye nedzimwe nyaya.
Carla Montero - Hurukuro
LITERATURE CURRENT: Musoro wenovhero yako ndewekuti Iyo menduru yemoto. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
CARLA MONTERO: Iyo menduru yemoto tora vamwe vevatambi kubva mune yangu yapfuura novel, Tafura ye emerald, kuti vatange a kutsva kutsva mukutsvaga chisaririra chinopa bhuku racho musoro waro. Ana García-Brest, wechidiki munyori wenhoroondo, uye Martin Lohse, muvhimi wepfuma asinganzwisisike, ndivo varatidziri vechirongwa ichi chinovatora Madrid, Berlin, Zurich, Saint Petersburg kana Istanbul munhangemutange ine ngozi kuti ubate chishongo.
Panguva yekutsvaga kwavo, vanozobatana ne nhoroondo yezvakaitika kare muBerlin, muna Chivabvu 1945, mushure mekunge maSoviet atora guta uye Hondo Yenyika II inopera muEurope. Muchiitiko ichi mavara akati wandei anoungana ane zvakawanda zvekuita nemedallion: Katya, mupfuri weRussia; Eric, musayendisiti wokuGermany; Ramiro, mudzidzi wechiSpanish; and Peter Hanke, aimbova mumiriri veGestapo.
Pfungwa ye torazve mavara de Tafura ye emerald Icho chinhu icho, mumakore gumi aya kubva pakuburitswa kwebhuku iri, the vaverengi. Izvo, pamwe chete nemimwe misoro yandaida kukurukura uye yaiita seyakakwana nepurojekiti, zvakatungamira Iyo menduru yemoto.
CM: Kwete, handiyeuki bhuku randakatanga kuverenga. Inogona kunge iri komiki, ndichiri mudiki ndaivada, uyewo mabhuku e Elena Fortun, Vashanu, VaHollisters… Pamwe bhuku revakuru rekutanga randaverenga raiva Rebecca, ivo Daphne du maurier, uye zvakandibhowa. Chinhu chekutanga chandakanyora ndechekuti a romantic adventure, noruoko, mumafolio, kuva pwere.
CM: Ndine zvakawandisa vanyori vanofarira, ini handikwanise kusarudza mumwe. Jane Austen, masisita Brönte, Charles dickens, Oscar Wilde, Agathe Christie, Hemingway, Scott-Fitzgerald, Ken leaflet, Rosamunde Pilcher, Michael Delibes, Elena Fortun ... Buf, ndeyekuti ndakasiya zvakawanda ...
CM: A Jane eyre uye VaRochester.
CM: Hapana. Nemhaka yemamiriro angu ezvinhu senhengo yemhuri huru, ndinonyora pandinogona, pandinogona uye pandinogona.
CM: Kana ndikakwanisa kusarudza, ndinosarudza nguva dze kunyarara uye kusurukirwa, padhesiki rangu pamberi pehwindo, netii, inoguma yava kutonhora, uye kenduru yakabatidzwa.
CM: Zvose kunze kwekutya -kunze kwezvimwe zvekare- uye ngano yesainzi.
CM:Varume vasina vakadzi, ivo Murakami. Uye nyora, ndiri kunyora mashoma kubvunzana.
CM: Ini Ndakasarudza kuburitsa Denderedzwa reNovel Readers Award. Kusvika panguva iyoyo, ndakanga ndisati ndawana basa rokutsikisa, ndakanyora kuti ndifare zvangu. Asi ndakaona mubairo uchangobva kuziviswa uyu uye chokwadi chekuti wakavhoterwa chete nevaverengi zvakandikurudzira kuti ndizviratidze. Ndakaihwina uye zvaita kuti ndisvike pandiri nhasi, makore gumi nemaviri gare gare uye nemanovhero matanhatu akatsikiswa.
Parizvino, kuvapo kwevakawanda kuzvishambadza mapuratifomu Iyo yakanaka showcase kuita kusvetukira munyika yekushambadzira. Ichokwadi zvakare kuti kune kukwikwidza kwakawanda uye, kubva pane zvandinonzwa, zvakaoma kuwana mabasa anobatanidza hutano uye kutengeserana.
CM: Mamiriro ezvinhu aripo haasi kundikanganisa padanho rehunyanzvi, chero zvakadaro, arikuitira nani nekuti makore aya edenda. vanhu vawanazve kuravira kwavo kuverenga sechinhu chinonyanya kukosha chevaraidzo. Chero zvazvingava, Handifunge kuti denda iri rinondikurudzira. Ini zvangu ndine zvakakwana kurarama nazvo, handidi kuti zviitewo chikamu chenyaya dzangu. Haisi kana nyaya inoyevedza kwandiri semuverengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Carla Montero. Hurukuro nemunyori weThe Fire Medallion